उपासना पाण्डे - नारी
उपासना पाण्डेका लेखहरु
विवाहअघि स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ
विवाहअघि महिलाले पाठेघरको अवस्था ठीक छ–छैन भनेर अल्ट्रासाउन्ड, गर्भाशयको अवस्था कस्तो छ तथा मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गरे–नगरेको जाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उपासना पाण्डे, चैत्र १५, २०७३
जीवनशैली बदलौं रोगबाट जोगिऔं
हिजोआज जीवनशैली यति व्यस्त छ कि मानिसको जीवन मेसिनजस्तै भएको छ । धेरैजसो समय कम्प्युटर, ल्यापटप आदिमा बिताउनुपर्छ ।
उपासना पाण्डे, चैत्र १३, २०७३
मिर्गौलासम्बन्धी समस्याबाट जोगिने उपाय
नेपालमा प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा विश्व मिर्गौला दिवस मनाइन्छ । मिर्गौला रोगको सम्भावना धेरै भएकाले यसको उपचारमा सबैको पहँुच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले विभिन्न काम भैरहेको छ ।
उपासना पाण्डे, फाल्गुन १४, २०७३
महिनावारी बार्नु कति उचित ?
महिनावारी प्राकृतिक नियम हो । यससम्बन्धी उचित ज्ञानको अभावमा धेरैका लागि महिनावारी समस्या बनिरहेको छ । यसले गर्दा महिलाहरू शारीरिक तथा मानसिक पीडा खेप्न बाध्य छन् । महिलाको निश्चित उमेर (९ देखि १६ वर्ष ) पुगेपछि यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।
उपासना पाण्डे, माघ २३, २०७३
महिनावारी किन गडबड हुन्छ ?
सिनामंगलकी १९ वर्षीया सृष्टि कार्कीको महिनावारी जहिले पनि ३ महिनाको फरकमा हुन्छ । उनको जस्तो समस्या धेरै किशोरीलाई हुन्छ । यसैगरी बालाजुकी कृषा प्रधानको पहिलो महिनावारी भएपछि दुई महिनाको अन्तरमा हुने गरेको छ । यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नभएको स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. उर्मिला कार्की बताउँछिन् ।
उपासना पाण्डे, माघ २१, २०७३
महिलामैत्री छैन महिनावारी
चाबहिलकी ३० वर्षीया रश्मि श्रेष्ठले विवाहअघि महिनावारी बार्ने गरेकी थिइनन् । विवाहपछि घरमा चार दिनसम्म छुन नहुने चलन थियो । उनलाई त्यो सब गर्न निकै गाह्रो भयो । सुरुवातका केही समय उनले चुपचाप ती सबै नियम पालना गरिन् ।
उपासना पाण्डे, माघ १७, २०७३